Iyi ndiyo nyowani Control Center uye Lock Screen muIOS 11 | IPhone nhau
Iyi ndiyo nyowani Control Center uye Lock Screen muIOS 11
Iyo Control Center uye iyo Lock Screen anga ari maviri eiyo iOS mapoinzi akagadziridzwa kakawanda mumakore achangopfuura. Zvinotaridza kuti kubva kuCupertino havagutsikane nenzira iyo idzo nzvimbo dzemushandisi dzinogadzirwa, ndosaka nhasi panguva yeWorld Wide Developer Musangano we2017 isu takakwanisa kuona zvazvino maererano nenhau dzeiyi maviri akakosha mapoinzi eanoshanda system. Iyi ndiyo nyowani, ine simba uye yakavandudzwa Control Center yeIOS 11, usapotse.
Iyi nyowani Control Center inotivigira iwo akafanana mashandiro senguva dzose, muchokwadi inotitorera isu zvimwe, zvisinei, yakura zvakanyanya. Iye zvino tichava nerudzi rwehurongwa pamhando dzakasiyana. Zvinonzwika senge iyo nzira yaApple yekuonekana kwese kune akawanda-peji Kudzora Center. Iyo keypad yeMusic yakabatanidzwazve mune yekutanga Control Center, nepo mamwe mabhatani achiramba akasimba.
Nekudaro, ivo vakawana mu 3D Kubata kugona, iko Apple inotanga kusiya izvo zvishandiso pazasi peiyo iPhone 6s. Semuenzaniso, kana tikadhinda wekutanga kusarudza kubva kumusoro kuruboshwe, Tichava nemabhatani matsva, senge iyo yekumisa data traffic uye GPS. Kune rimwe divi, bhatani remimhanzi rinowedzerwazve kuratidza rumwe ruzivo, nepo isu tichigona kugadzirisa vhoriyamu uye kusimba kweNight Shift nemupumburu wakagadziridzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyi ndiyo nyowani Control Center uye Lock Screen muIOS 11
kuchema kupaki ..
Ehe, rega iwe uise iwo ma icon aunoda 😉
iOS 11 inouya pamberi: mameseji uye Apple Bhadhara
iMac Pro, iyo nyowani Apple chikara chauchazorota kuva nacho